Filimkii 'Indhaha Maska' GI Joe Origins 'Wuxuu Keenayaa' Radical Ninja Action '- iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Filimkii 'Indhaha Maska' GI Joe Origins 'Wuxuu Keenayaa' Radical Ninja Action '
Muuqaalka ugu dambeeya ee GI Joe's filimki ugu dambeeyay Snake Indhaha Caawa hoos u dhacday oo dusheeda waxaa ka buuxay dagaal xagjir ah oo ninja ah, seefo iyo xiddigo tuuris waxaa sidoo kale ku jira Samara Weaving (The Ilysitter, Ready or not) doorka caanka ah ee Joe ee Scarlett. Dabcan, filimku wuxuu sidoo kale na siin doonaa sheeko asal ah oo Indho Mas ah iyo Duufaan Shadow oo leh sawiro kale oo Joe ah oo kusoo boodaya jidka. Sidoo kale way iska furi doontaa GI Joe: Kacbada Cobra iyo GI Joe: Aargudasho oo u dhaqan barta cusub ee rajada ballaartay ee Joe.
Dulucda sheekada Indhaha Maska: GI Joe Origins waxay u dhacdaa sidan:
GI Joe Origins wuxuu u jilayaa Henry Golding inuu yahay Indho Mas, oo kaligiis kaligiis istaaga oo lagu soo dhoweeyo qabiil hore oo Jabaan ah oo la yiraahdo Arashikage kadib markuu badbaadiyay nolosha dhaxal sugaha. Markuu yimid Jabbaan, Arashikage wuxuu baraa Indhaha Maska siyaabaha halgamaaga ninja isagoo waliba u siiya wax uu u oomanaa: guri. Laakiin, marka siro laga soo qaado wixii la soo dhaafay, sharaftiisa iyo u daacad noqoshadiisa Indhaha Maska ah ayaa la tijaabin doonaa - xitaa haddii taasi macnaheedu tahay luminta kalsoonida kuwa ugu dhow. Iyada oo ku saleysan dabeecadda caanka ah ee GI Joe, Indhaha Maska: GI Joe Origins sidoo kale waxaa jilaya Andrew Koji oo ah Storm Shadow, Úrsula Corberó oo ah Baroness, Samara Weaving as Scarlett, Haruka Abe as Akiko, Tahehiro Hira as Kenta iyo Iko Uwais as Hard Master.
Ma aqaan idinka raggiin laakiin waxaan maskaxdeena kaga lumeynaa goos gooskan. Aad baan u jeclahay xaqiiqda ah inay kaliya ku jeesjeeso koofiyada isha Maska.
Maxaad ka fikirtaa ninkaan Indhaha Maska: GI Joe Origins isjiidka Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Indhaha Maska: GI Joe Origins dhulalka tiyaatarada July 23.
GI JoeninjasSnake Indhaha
'Chucky' Ayaa Doortay Kaalinta Da 'yarta iyo Sharnimada Charles Lee Ray